आँचलले श्रीमानसँग मिलेर फिल्म बनाउँदै, नायकमा पल शाह ? – Hamro24News
July 7, 2021 adminLeaveaComment on आँचलले श्रीमानसँग मिलेर फिल्म बनाउँदै, नायकमा पल शाह ?
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सुन्दरीहरु विबाह लगत्तै चलचित्र क्षेत्रबाट पलायत हुँदै आएको परिप्रेक्षमा नायिका आचल शर्मा भने विबाहपछि पनि जम्ने संकेत देखाएकी छिन् । उनी नायिका मात्र नभइ अब निर्मात्री बन्ने तयारी गरेकी छन ।निर्देशक मिलन चाम्सले गर्ने तयारी उनीहरुले गरेका छन् । चलचित्रलाई विशेष बनाउने तयारीमा आँचल र उदिप**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
विबाह लगत्तै कोरोना कहर सुरुभएपछि चलचित्रमा काम गर्ने वातावरण नभए पनि म्यूजिक भिडियोमा ब्यस्त बन्दै गइरहेकी आँचलले चलचित्र निर्माण गर्ने तयारीमा छिन् । आँचलले पति डाक्टर उदिप श्रेष्ठसँग मिलेर चलचित्र निर्माण गर्न लागेकी खबर बाहिरिएको छ ।
जसको निर्देशक निर्देशक मिलन चाम्सले गर्ने तयारी उनीहरुले गरेका छन् । चलचित्रलाई विशेष बनाउने तयारीमा आँचल र उदिप रहेका छन् ।पल र आँचलको जोडी बिवाहपछि भने कुनै भिडियोमा पनि सँगै देखिएका छैनन् । तर अब उनको फिल्ममा नायकमा पल शाह नै होलान
बिवाहको केहि समयपछि आँचलले मेरो परिवारले फिल्म बनाए नायकमा पल शाह ने हुने बताएकी थिइन् । यो बिषयले निकै चर्चा पनि पाएको थियो ।
तरपनि कुनै समय निकै जमेको पल र आँचलको जोडी बिवाहपछि भने कुनै भिडियोमा पनि सँगै देखिएका छैनन् । तर अब उनको फिल्ममा नायकमा पल शाह नै होलान या अरू कोही हुनेछ त्यो भने हेर्न बाँकि नै छ ।
हार्दिक बधाई ,चर्चित हास्यसिरियल कि कलाकार रक्षा श्रेष्ठ आमा बनिन् !
कठै, निर्दोष महिलालाइ ज्यानलिने गरी कूट पिट , दोषी लाई सजाए दिन फोटो छोएर सेयर गरिदिनुहोला…